DEG DEG:- Galmudug oo ciidamo aad u badan geysay deegaanka Jeexdin iyo xiisadda oo aad u kacsan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Galmudug oo ciidamo aad u badan geysay deegaanka Jeexdin iyo xiisadda oo aad u kacsan
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in xiisad kacsanaan ah ay haatan ka jirto magaaladaasi, kadib markii maamulka Galmudug ay ciidamo aad u badan geeyeen deegaanka Jeexdin ee duuleedka magaaladaasi.
Deegaanka Jeexdin ayaa ah meeshii dhawaan lagu duqeeyay islamarkaana lagu dilay ciidamadii ka tirsanaa maamulka Galmudug ee ku sugnaa saldhig deegaankaasi ku yaalay, waxaana xaaladda ay haatan tahay mid aad u kacsan.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada daraawiishta ee maamulka Galmudug Gaashaanle Sare Xasan Faarax Kaarshe ayaa deegaanka Jeexdin kula kulmay saraakiisha ciidamada difaaca ee maamulka Galmudug oo saacihii ugu dambeysay deegaankaasi lagu daad-gureeynayay.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, waxaana magaalada Gaalkacyo haatan ka socda kulamo gaar gaar ah oo ay yeelanayaan ciidamada amniga Galmudug, kaas oo looga hadlayo xaaladda gobolka Mudug.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadaan ayaa kusoo beegmaysa xilli maamulka Galmudug uu sheegay in Puntland ay shalaay doonto arrintii ay kula kacday ciidankooda ku sugnaa deegaanka Jeexdin oo ku yaala duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.